"I-4BBB" ligama lefomathi yefomati, kunye nokuqonda ukuba yinto elula ngokukhawuleza nje ngokuba uyazi ukuba "4BBB" imele: "ibhola le-4, ibhola elungileyo" okanye "ibhola le-4, ibhola engcono."
Kumqhubi we-4BBB, abadlali begalufu bahlala kwiqela labane, kwaye i-golfer nganye idlala ibhola yayo yonke. Ngoko kukho iibhola ezine zegalufa ezidlala kwindawo nganye, kodwa ibhola elilodwa (ibhola elingcono, okanye ibhola eliphantsi) libala ngalinye iqela ngalinye.
Iigolisa ezine kwiqela kwi-4BBB linokuthi enye yezinto ezimbini:
amabini, amaqela amabini amaqela abambene kunye,
okanye elinye, iqela lomntu onama-4 (amaqela abantu aba-2 aqhelekileyo).
Enye indlela yokuyibeka: I-4BBB idla igama elinye ibhola elihle (amaqela angama-4) okanye ibhola engcono (iifom ezimbini zabantu).
Kwezinye iindawo zehlabathi legalufa, kuqhelekileyo kwii-4BBB zethamnethi zokusebenzisa amanqaku eStableford .
Ukudlala i-4BBB kunye namaqela angama-2 abantu
Ukuba ngaba amaqela omntu amabini asetyenziselwa umqhudelwano we-4BBB (njengoko kuphawulwe, indlela eqhelekileyo yokuyidlala), iqela leQela 1 kunye neqela leqela 2 kunye kunye. Kwakhona, oko kuthetha iibhola ezine zegalufa zidlala kwindawo nganye kwiqela. Kwaye ngalinye iqela, kwindawo nganye, ibhola eliphantsi-ibakala elingcono phakathi kwamaqabane amabini - kubalwa njengamanqaku eqela leqela.
Ukuba iGolfer A kunye neGolfer B yenza iqela le-1, kwaye kwinqanaba lokuqala A amanqaku ama-5 kunye no-B amanqaku 4, 4 yinqanaba leqela kwi-Hole 1.
Ngamaqela omntu a-2, i-4BBB ingadlala njengemidlalo yokudlala okanye umdlalo wokudlala .
Ukudlala i-4BBB kunye namaqela angama-4
Ukuba amaqela omntu amane asetyenziswa, ke i-4BBB isebenza kanje:
Zonke iiglasi ezine zegalufa zize zidlale iibhola zazo kwindawo.
Amanqaku aphantsi phakathi kwamanani amane njengeqela leqela kulo mgobo.
Ukuba, kwi-Hole 1, Godfer A amanqaku 6, B ufumana ama-5, ama-C amanqaku a-6 kunye no-D enza i-4, kwaye iqela leqela lalo mgobo ngu-4.
Xa amaqela omntu angama-4 asetyenziswa, i-4BBB idlala njengendlela yokudlala.
Kwaye kunye namaqela angama-4, kubaluleke kakhulu ukusebenzisa izixhobo zokukhubazeka nokunikezela indawo ngokusekelwe kumanani amanqaku . Ngaphandle koko, abadlali begalufu ababuthathaka kwiqela baya kuba bambalwa kakhulu (ukuba kukho) amathuba okufaka igalelo leqela ngalinye kunoma yiphina indawo.
Ukukhubazeka kwi-4BBB Tournament
Akukho mithetho malunga nokuba i-4BBB imele ikhubaze, ngoko ke, ekugqibeleni, uya kulandela inkqubo echazwe ngabaququzeleli bamatonti.
Kodwa kwibhola elungileyo lomntu o-4, indlela yokukhubazeka kakhulu yile:
Amadoda asebenzisa i-80 ekhulwini yekhosi yabo yokukhubazeka;
Abasetyhini basebenzisa iipesenti ezingama-90 zekhosi yabo yokukhubazeka.
Iziphakamiso zokukhusela kwi-4BBB usebenzisa amaqela a-2 abantu, jonga inkcazelo yebhola engcono .
Ukuqonda oko Ixesha elithi "Elibi" libhekiselele kwiKlasi yeGalofu
Ukuqonda ukulinganisa kwee-Ski Trail
Yintoni i-Green Grass Pro Shop?
Yayiyintoni i-Nike Tour eGoli?
IQela leMidlalo yokuThuthuka kweMidlalo yaseTyhini yaseAustria
I-Pull (okanye i-Pulled Shot) kwiGalofu kunye Neyayibangela
Izinto Ezilishumi Zonke Iimpawu zeZakhono ze-Skater zokuPakisha ngaphakathi kweGrafik Bag
AbaPhambili bezoPolitiko bezoPolitiko eMelika
Imiba YeBhayibhile NgoThixo
Amacangci amandulo - UbuBungqina bezinto eziMvubukulo zokuPhatha kweMculo
Indlela yokusebenzisa i-oyile ephasayo ukuze ukhulule umthambo okanye i-Bolt
I-Nas 'Discography: Zonke iArab Albums
Ukwakhiwa kweManje kunye nokuNtshintsha kwawo
I-Apps for Stage and Performing Arts Designers
UThomas Alva Edison Quotes on Religion and Faith
Ama-Oscar amakhulu kakhulu amaxesha e-Superman
Indlela yokugcina iiKarard zakho zeTarot zikhuselekile
5 Amaqhawe aKhatywayo aMaTyhini aBaMnyama
Inkqubo yokuPrinta yeSolar